कांग्रेसलाई जिताउनुस सबैलाई सकिँदैन केहीलाई फ्री भिसा र फ्री टिकटमा मलेसिया पठाइदिन्छु – Sandes Post
May 7, 2022 488
नेपाली कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य डा. आरजु राणा पछिल्लो समय एकपछि अर्को अभिव्यक्तिका कारण विवादमा परिरहेकी छन्। बिहीबार गृहजिल्ला डडेल्धुरा पुगेर नेपाली कांग्रेसले नजित्ने पालिकालाई पैसा नदिने बताएकी उनले शुक्रबार कैलालीमा अर्को विवादित भाषण गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी राणाले धनगढीमा चुनावी सभालाई सम्बोधनका क्रममा त्यहाँका स्थानीयलाई फ्री भिसा र फ्री टिकटमा मलेसिया पठाइदिने आश्वासन दिएकी छन्। ‘सुदूरपश्चिम पछाडि परेको क्षेत्र हो। यो क्षेत्रलाई हामी विशेष ध्यान दिन्छौँ, तपाईंहरुले कांग्रेसलाई जिताउनुस्’, उनले भनिन्, ‘हामी सबैलाई गर्न सक्दैनौँ। तर, यो ठाउँमा दु:ख पाएकाहरु केहीलाई पढाउने छु। मलेसिया जाने कोही भएमा मलाई आउने कोटाबाट फ्री भिसा र टिकट मिलाउनेछु। हामी त्यस्ता ५-६ जनालाई मलेसिया पठाउँछौ। तर सबैलाई लान सकिन्न, नसके यहीँ रोजगारी दिन कोसिस गर्छौँ।’
सम्बोधनका क्रममा राणाले २०७४ मा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पराजित भए पनि आफूलाई कुनै फरक नपर्ने बताइन्। आफूलाई हराएका एमाले सांसद नारदमुनि रानाले केही काम गर्न नसकेको पनि उनले आरोप लगाइन्। उनले कांग्रेसकै पहलमा धनगढीको विकास भएको जिकिर गरिन्।
व्यक्तिगत भिसा प्राप्त गरेपछि मात्र तपाईलाई रोजगार प्रस्ताव गरिएको कम्पनीमा पैसा जम्मा गर्नुहोस्।
कृपया भाउचर सङ्कलन गर्न निश्चित गर्नुहोस्।
तपाईले काम गर्ने वा काम गरिरहनुभएको देशमा रहेका नेपाली कूटनीतिक कार्यालयहरुको सम्पर्क नम्बर र ठेगाना नोट गर्नुहोस्।
यसले तपाईंलाई आवश्यक हुँदा तिनीहरूसँग सम्पर्कमा रहन सजिलो बनाउँछ। यस कागजातमा उल्लेख गरिएको भन्दा बढी नगद नदिनुहोस्।
वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि अभिमुखीकरण तालिम लिनु अनिवार्य छ ।
रोजगारीका लागि विदेश जानुअघि तपाईले काम गरिरहनुभएको देश, तपाईले काम गरिरहनुभएको कम्पनी र तपाईलाई उपलब्ध गराइने सुविधाका बारेमा राम्ररी पढ्नुहोस्।
यसलाई ध्यानपूर्वक पढेर मात्र नियम र सर्तहरूमा हस्ताक्षर गर्नुहोस्। कृपया त्यसको प्रतिलिपि सुरक्षित रूपमा आफूसँग राख्नुहोस्।
विदेशमा यात्रा गर्दा नेपालकै विमानस्थल प्रयोग गर्नुहोस् किनकि तपाईलाई धोका हुने सम्भावना छ। यदि तपाईंलाई यस विज्ञापनको बारेमा थप जानकारी चाहिन्छ भने, कृपया वैदेशिक श्रम विभाग, तहचलमा सम्पर्क गर्नुहोस्।
Prevभाेली दिउसो ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ १ बजे ‍‍‍‍‍‍‍ पृथ्वी ४ मिनेटका लागि अन्धकार हुने दावी
Nextके बालेन पनि रन्जु दर्शना जस्तै सामाजिक संजालमा हाईहाई र निर्वाचनमा बाईबाई हुने हुन् त ? यस्तो छ कुरा !
यस्तो छ नबिल बैंकले जारी गरेको अत्यन्त जरुरी सूचना !